Indlu kaSista eluhlaza
USuelly & Ildo unezimvo eziyi-169 zezinye iindawo.
Oku kukuma kwakho kwindlela eya eRui Vaz. Kwabo bathanda umoya omtsha, izandi zezilwanyana kunye nokurhangqwa yindalo, ngokuqinisekileyo le yindawo yakho yokuphumla.
Indlu ibiyekamakhulu kwaye ngoku uMama uhlala apha negadi yakhe. I-Wifi isebenza kakuhle xa ufuna ukwenza umsebenzi, okwangoku, ayifumaneki kwigumbi lakho, kodwa kungekudala. Ngexesha lemvula ungandwendwela ichibi lendalo okanye iingxangxasi ezimfutshane.
Indlu ineBungalow, ejikelezwe zizityalo, njengoko iluthando lukamama. Kukho ingaphandle ehleliyo xa ufika nje endlini. Igumbi likwi-bungalow encinci enegumbi kuphela kunye nendawo yokutyela eneTV kunye nefriji. Igumbi lokuhlambela lahlukile, kodwa likwabucala (akukho heater yamanzi okwangoku kweli gumbi lokuhlambela). Ungasebenzisa ikhitshi elikumgangatho ophezulu ukupheka. Umama akakuthandi ncam ukupheka.
Ngexesha lemvula ungandwendwela ichibi lendalo okanye iingxangxasi ezimfutshane. Kukho imakethi esembindini (malunga nomgama wokuhamba we-10mn) okanye ungaya emasimini kwaye uthenge izinto eziphilayo.
Ndisekhaya kakhulu, ngoko ke nantoni na oyifunayo, ukuba ndiyakwazi ukunceda ndiyakwenza njalo.